Proverb Aoka fa ny renikely no manana adidy. [Rinara 1974 #321]
Proverb Aza misoroka adidy, ka tsy manan-tiana. [Houlder 1895 #227, Veyrières 1913 #5365]
Proverb Ny adidy efa tsy enti-mirehaka, ny mahaory tsy efan-kavana. [Rinara 1974 #2821]
Proverb Ny adidy tsy an' olon-dratsy. [Veyrières 1913 #653, Rinara 1974 #2822]
Proverb Telo no adidin’ ny takotra: ny mandrako-poana adidiny; ny mandrako-masaka adidiny; ny mandao masaka adidiny. [Cousins 1871 #3066]
Proverb "Veloma" tsy mba adidy: sakafo lany tsy mba andraikitra. [Houlder 1895 #146]
Proverb Vinanto norosoana fanam--bomanga, ka mahatsiaro ny adidy tsy vitany. [Rinara 1974 #4953]
Proverb Didio ihany fa aza ny lelany no adidy fa ny vohony. [Rinara 1974 #993]